Kushongedza - Shanghai Comi Aroma Co., Ltd.
Chimwe chinhu chakakosha mukuzadzikisa kutaridzika kwako kwaunoda kuri munzira yekupakisha kwako kwapera.
Isu tinopa sarudzo dzakasiyana dzakasiyana dzaunosarudza kubva, kusanganisira mu-chakuvara chemuvara, mukati uye kunze kwekufapfaidza, metallization, uye kupopera kwekupedzisa separera, matte, kubatwa zvakapfava, kupenya uye chando.
Jekiseni Kuumbwa inzira yekugadzira yekugadzira zvikamu nekubaya zvinhu zvakapisa uye zvakavhenganiswa, zvakaita segirazi uye mapurasitiki, muforoma umo inotonhora uye kuomesa kune kumisikidza kweiyo mhango. Ino inguva yakanakira kuti rako raunoda ruvara rive chikamu chezvinhu zvacho pachazvo, pane kuwedzerwa gare gare.
MUMWOYO / MUNHU WOKUDYA
Kupfapfaidza kupfeka mudziyo kunopa kugona kugadzira iyo yakasarudzika ruvara, dhizaini, dhizaini, kana zvese-pane chero girazi kana plastiki. Seizvo zita rinoratidzira, mune ino nzira midziyo inosaswa kuti isvike pane chaunoda - kubva pachando chando, manzwiro akavezwa, imwe chete tsika yemavara kumashure kwekuwedzera dhizaini kupedzisa, kana mune chero inofungidzirwa dhizaini inosanganiswa nemarudzi mazhinji, inopera kana gradients.
Unyanzvi uhu hunodzokorora kutaridzika kwechrome yakachena pamidziyo. Maitiro acho anosanganisira kupisa simbi yesimbi mukamuri yemuchina kusvikira yatanga kubuda. Iyo simbi yakapusa inonamira uye inosunga kune iyo mudziyo, iri kutenderedzwa kubatsira kubatsira kuita yunifomu kunyorera. Mushure mekugadzirisa simbi kwapera, jasi rekudzivirira rinoiswa mumudziyo.
Embossing inogadzira yakasimudzwa mufananidzo uye debossing inogadzira yakadzoserwa mufananidzo. Aya mahunyanzvi anowedzera kukosha kwekupaka pasuru nekugadzira yakasarudzika logo dhizaini iyo vatengi vanogona kubata nekunzwa.
Iyi yekushongedza nzira ndiyo imwe nzira yekushandisa silika skrini. Ingi inoendeswa kuchikamu kuburikidza nekumanikidza uye neshungu silicone roller kana kufa. Kune akawanda mavara kana mavara ane hafu-toni, kupisa kupisa zvinyorwa zvinogona kushandiswa izvo zvinopa iwo mavara eruvara, kunyoresa uye kukwikwidza mitengo.
Hydro-mifananidzo, inozivikanwawo seyekunyudza kudhinda, kudhinda kwemvura kudhinda, kudhirowa kwemvura imaging, hydro dipping kana cubic kudhinda, inzira yekushandisa yakadhinda dhizaini kumatatu-eenzvimbo. Iyo hydrographic maitiro inogona kushandiswa pane simbi, plastiki, girazi, yakaoma huni, uye zvimwe zvakasiyana zvinhu.
Mune zvekuzora, runako, uye bhizinesi rekuchengetedza wega, kurongedza kuri zvakare nezve fashoni. Kuputira kwakapwanyika kunoita basa rakakosha mukugadzira yako pasuru yakamira pane masherufu ezvitoro.
Kunyangwe iri chando chitaera kana penya penya, kupfeka kunopa yako package imwe inoratidzika kutaridzika.
HOT / FOIL KUTSIKIRA
Kupisa kutsikisa inzira inoshandiswa neiyo foil yemavara inoiswa kumusoro kuburikidza nekubatanidzwa kwekupisa uye kumanikidza. Kupisa kutsikisa kunogadzira kupenya uye kwoumbozha kutaridzika pamatehwe ekuzora, mabhodhoro, zvirongo, uye kumwe kuvhara. Mavara maficha anowanzo kuve egoridhe nesirivheri, asi brushed aluminium & opaque mavara aripowo, akakodzera kune siginecha dhizaini.